प्रस्ताव – Himalaya Television
बागमती प्रदेशसभा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित
१६ जेठ २०७८ मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ । बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको ८ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकले प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले दोलखा जिल्ला...
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदै ?(भिडियो रिपोर्टसहित)
१२ वैशाख २०७८ काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन भोलिदेखि शुरू हुँदैछ । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकमा भोलिको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने सहमति भएको छ...
अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्त्यको सिफारिस
२४ चैत २०७७ बुटवल । विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन लागेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज मध्यरातिदेखि लागू हुनेगरी प्रदेश सभा अन्त्यको सिफारिस गर्नुभएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आज राती १२ बजेबाट अन्त्य हुने...
कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधिसभामा तीन प्रस्ताव दर्ता
४ चैत २०७७ काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा तीन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । कांग्रेस सांसदले मंगलबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दुई जरुरी सार्वजनिक महत्वका र एक सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो । महिला तथा बालवालिकामाथि भएका...
अब के हुन्छ शेरधन राईमाथिको अविश्वास प्रस्ताव ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१ चैत २०७७ विराटनगर । नेकपाभित्रको विवाद अदालतले राजनीतिक फैसलामार्फत सल्टाए पनि एमालेभित्र अर्को विवाद सुरु भएको छ । यसको असर प्रदेशसम्मै देखिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभा...
स्वीट्जरल्याण्डमा बुर्काविरोधी प्रस्तावले पायो समर्थन
२४ फागुन २०७७ स्वीट्जरल्याण्ड । स्वीट्जरल्याण्डमा मुस्लिम महिलाले अनुहार ढाक्ने पोशाकमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावले समर्थन पाएको छ । स्वीट्जरल्याण्डमा भएको जनमत संग्रहमा मुस्लिम महिलाले मुहार ढाक्ने बुर्का तथा निकाबजस्ता पोशाकको पहिरनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावमा सामान्य बहुमत आएको हो ।...
मैले कसैलाई प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरेको छैनः प्रधानमन्त्री ओली (भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ फागुन २०७७ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव नगरेको बताउनुभएको छ । कांगेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद प्रस्ताव गरेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको खण्डन...
अमेरिकामा न्यूनतम ज्याला १५ डलर पुर्‍याउने प्रस्तावमा सहमति जुटेन
१४ फागुन २०७७ वाशिङ्गटन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सार्नु भएको कोभिड–१९ पुनरुत्थान प्याकेजमा अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रतिघण्टा न्यूनतम १५ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिए पनि सिनेटले पारित गरेको प्रस्तावमा ज्यालाको विषय हटाइएको छ । अमेरिकी सिनेटका...
ट्रम्पमाथिको महाभियोग प्रस्तावमा आज पनि बहस हुँदै
३० माघ २०७७ वाशिङ्गटन डिसी । निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा अमेरिकी माथिल्लो सदनमा आज पनि बहस हुँदैछ । आज ट्रम्प पक्षका सांसदहरुले बहस गर्ने छन् । अमेरिकी माथिल्लो सदनमा सय जना सिनेटर छन् । ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउन...
राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन माग
१ पुस २०७७ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रतृ संगठन नेपाल तरुण दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन माग गरेको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अलोकतान्त्रिक र संविधानको भावनाविपरीत भएको जनाउँदै तरुण दलले यस्तो माग गरेको...